Mpiasan’ny ONG Taiwan Nanjavona, Nankany Beijing ny Vadiny Hanavotra Azy · Global Voices teny Malagasy
Mpiasan'ny ONG Taiwan Nanjavona, Nankany Beijing ny Vadiny Hanavotra Azy
Voadika ny 10 Avrily 2017 12:01 GMT
Valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety notontosain'ny fikambanana tsy miankina Taiwaney mikasika ny fanjavonan'i Lee Ming-cheh tamin'ny 31 Martsa 2017. Avy amin'ny pejy Facebook Where is Lee (Aiza i Lee) ?.
Nanjavona tamin'ny 19 Martsa ilay Taiwaney mpiasan'ny ONG sady mpikatroky ny zon'olombelona Lee Ming-cheh raha niditra tao Shina avy any Makaô. Ankehitriny, nanapa-kevitra handeha ho any Beijing mba hijery azy ny vadiny.
Folo andro taorian'ny nanjavonany, nilaza i Ma Xiaoguang, mpitondratenin'ny Biraon'ny Fiandraiketan-dRaharaha Taiwan ao Shina, fa natao fanadihadiana noho ny “ahiahy mampidi-doza ny filaminam-pirenena” i Lee. Saingy tsy nilaza ny toerana misy azy ny manampahefana Shinoa.
Nanambara ny vadiny, Lee Ching-Yu tamin'ny 31 Martsa fa nandeha tany Beijing izy mba hanavotra ny vadiny. Nanazava ny fanapahan-keviny tamin'ny fanambarana an-gazety izy (izay nadikan'ny tranonkala mpiaro ny zon'olombelona ao Shina, China Change):
Fantatro avy amin'ny tantaran ‘ny Horohoro Fotsy (White Terror) tany Taiwan fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena ny rafitra tan-dalàna ao amin'ny firenena iray, dia tsy ilaina ny ezaka rehetra hanome fiarovana voalazan'ny lalàna. Afaka manome fiarovana ho an'ny olombelona sy ny zon'olombelona ihany izahay – saingy ny rafi-dalàna ao amin'ny firenena tahaka izany dia tsy mifototra amin'ny fomba fijery manerantany momba ny zon'olombelona.
Noho izany antony izany no nahatonga ahy nanao ity fanambarana ity: Tsy handeha hanakarama mpisolovava aho, ary avy eo hiditra amin'ny adilahy ara-pitsarana tsy misy fotony.
Tsy manan-tsiny ireo mpiasan'ny zon'olombelona rehetra, ireo rehetra mitondra fanantenana ho an'ny vazan-tany efatr'izao tontolo izao izay mila nanohana ny zon'olombelona. Noho ny fanampian'ireo olona ireo indrindra no mampandroso ny mahasoa ny olona sy ny sivilizasiona.
Tsy tia tena ny vadiko rehefa manao zavatra fa manao zavatra amim-pitiavana ho an'ny olombelona, ​​ary matoky tanteraka aho fa ny zavatra rehetra nataony dia mendrika fanajana lehibe indrindra.
Nanapa-kevitra aho ny handeha ho any Beijing, mba hijery izay zava-mitranga, ary hanavotra ny vadiko.
Teraka tamin'ny taona 1975, mpiasa taloha tao amin'ny Antoko Demokratika Tia Fivoarana (DPP) i Lee ary mpiaro ny zon'olombelona ao Shina. Nanomboka nampiasa WeChat izy tamin'ny taona 2014 mba hizara amin'ireo namana ao amin'ny Shina tanibe ny tetezamita nandalovan'i Taiwan miala amin'ny fanjakana didy jadona mankany amin'ny demaokrasia. Teo anelanelan'ny taona 2015 sy ny fiandohan'ny taona 2016, niditra mpikambana mpilatsaka an-tsitrapo tao amin'ny fikambanana tsy miankina mpiaro ny zon'olombelona, Covenants Watch izy.
Nanomboka tamin'ny Febroary 2016, nanomboka niasa ho an'ny oniversiten'ny vondrom-piarahamonina tao an-tanànan'i Taipei izy
Fanjakana mahaleotena tsy ara-dalàna i Taiwan nanomboka tamin'ny taona 1949, rehefa resin'ny Antoko Komonista Shinoa tamin'ny ady an-trano ny Kuomingtang tao amin'ny Repoblikan'i Shina, ary nandositra nankany amin'ny nosy. Nitaky fiandrianana ao Taiwan hatrany i Beijing ary nandray ny fanjakana nizaka tena ho faritra mpikomy hiray amin'ny tanibe.
Hatramin'ny nandresen'i Tsai Ing-wen, avy ao amin'ny mpanohana ny fahaleovantenan'i Taiwan (DPP) tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny herintaona, nampitsahatra ny fifandraisana tamin'ny fomba ofisialy i Beijing. Sokajiana ho fahavoazana mianjady eo amin'ny fitondrana roa tonta ny fisamborana an'i Lee Ming-cheh.
Tsy ela taorian'ny nanamafisan'i Beijing ny fisamborana an'i Lee Ming Cheh, niampanga an'i Beijing ho nitàna azy am-pahanginana noho ny antony tsy fantatra i Lee Ching-Yu sy ny vondrona zo sivily maromaro, ary nitaky ny famotsorana avy hatrany. Nanipika toy izao ny vadin'i Lee nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 30 Martsa:
Nizara ny traikefa demokraotikan'i Taiwan tamin'ny namana tamin'ny alalan'ny aterineto i Lee Ming-che. Manome lanja ny olana momba ny zon'olombelona izy ary mampiely fanantenana ho an'ny olona mila hafanana. Tsy heloka bevava ao amin'ny firenena mandroso rehetra izany fitondran-tena izany
Fikambanana zon'olombelona Amnesty International nandrisika an'i Beijing mba hanome fanazavana bebe kokoa mikasika ny fitànana azy:
Ny fihazonan'ny manampahefana Shinoa an'ilay Taiwaney mpiasan'ny fikambanana tsy miankina noho ny antony tsy mazava mikasika ny fiarovam-pirenena dia miteraka tahotra fa manitatra ny fanafihan'izy ireo amin'ireo izay manao fikatrohana ara-dalàna ny manampahefana
Wang Dan, mpikatroka tamin'ny hetsika manohana ny demaokrasia tao Tiananmen tamin'ny taona 1989 tao Shina tanibe kosa mihevitra fa ny fisamborana an'i Lee’ dia misy ifandraisany amin'ny lalàna momba ny fitantanana fikambanana tsy miankina vahiny lany vao haingana:
Araka ny vaovao rehetra misy, azo inoana tanteraka fa ny fisamboran'ny sampam-piarovana CCP an'i Lee Ming-cheh dia misy ifandraisany amin'ny lalàna momba ny fitantanana fikambanana tsy miankina vahiny nolaniana tamin'ny herintaona tao Shina. Mametra ny asan'ny fikambanana tsy miankina ny lalàna, ahitana filazana toy ny hoe “tsy mahazo manitsakitsaka ny tombontsoam-pirenena”. Ireo izay mahafantatra tsara ny fanjakana Shina dia mahalala fa ny rafitra toy izany dia azo ampiasaina hamerana ireo asa isan-karazany.
Afaka manome ny marika “manimba ny tombontsoam-panjakana” ho an'ny olona izay tsy tiany ny fanjakana [Shinoa]. Nanaraka akaiky ny zon'olombelona tao Shina i Lee Ming-cheh ary naneho mivantana ny heviny mikasika ny demaokrasia sy ny fahalalahana tao amin'ny WeChat. Azo heverin'ny CCP ho “mampidi-doza ny tombontsoam-panjakana” izany fihetsika rehetra izany.
Niahiahy kosa ilay Taiwaney mpiasan'ny fampahalalam-baovao, Tsai-Ching Yu, fa ny tsy fahombiazan'ny governemanta Taiwaney miaro ny olom-pirenena dia mety hiteraka krizim-pitantanana:
Tsy niantso mpisolovava ny vadin'i Lee Ming-cheh, Lee Ching-Yu, ary nankany Beijing mba hanavotra ny vadiny. Mampiseho izany fa tapaka tanteraka ny fifandraisana eo amin'ny Orina Fifankalozana ao Andilan-dranomasina sy ny Vaomieran-dRaharahan'ny Tanibe, sy eo amin'ny Fikambanana misahana ny Fifandraisana Manerana ny Andilan-dranomasina Taiwan sy ny Biraon'ny Fiandraiketan-dRaharahan'i Taiwan ao amin'ny Filan-kevi-panjakan'i PRC. Tsy misy ny fantsona ofisialy handaminana ny raharaha, izay nahatonga ny fianakavian'i Lee tsy niditra tamin'ny fantsona ofisialy ary nankany Beijing hitady fomba hafa hifandraisana… raha tsy manana paikady mahomby sy manohy mandray an-tanana ny raharaha amin'ny fomban'ny any anaty birao ny governemanta Taiwaney […] dia tsy ny fahafahana hiaro an'i Lee Ming-cheh ihany no votsotry ny DPP fa tsy hatoky ny fahafahan'ny governemanta mandamina ny fifandraisana manerana ny andilan-dranomasina intsony ihany koa ny vahoaka.
2 ora izayJapana